टच हेरेर भन्योनुस् यो गुड टच कि ब्याड टच ? – Ramailo Sandesh
टच हेरेर भन्योनुस् यो गुड टच कि ब्याड टच ?
काठमाडौं । अहिले गुड टच र ब्याड टचको बहस उत्कर्षमा छ । महिलाहरुको संवेदनशील अंगकमा पुरुषले नियतवश छुनुलाई ‘ब्याड टच’ भन्ने गरिन्छ, जुन यौनजन्य दुव्र्यवहार अन्तरगत पर्छ ।
हालै नायिका मिरुना मगरले आफूमाथि ब्याड टच गरेको भन्दै एक युवकलाई प्रहरी हिरासतमै पुर्याइन् । र, यही बेला चर्चा छ एउटा नृत्यको । हिमालयन टेलिभिजनमा प्रशारण हुने ‘डान्सिङ विथ स्टार्स’ को १७ औं एपिसोडमा मोडल सोनिका रोकायाले कोरियाग्राफर दिलिप ओखेडासँग उत्तेजक नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
‘गल्ति गरौं न’ बोलको गीतमा नृत्य गर्ने क्रममा कोरियोग्राफर ओखेडाले पटकपटक सोनिकाको संवेदनशील अंगमा हात र मुख पुर्याएको देखिन्छ । यो ‘ब्याड टच’ हो कि होइन भन्दै प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रशारण हुने र परिवारसहित हेरिने रियालिटी शोमा यस्तो नृत्य सुपाच्य मानिदैन । कमेन्टमा धेरैले यसलाई ‘अश्लिल’ संज्ञा दिएका छन् ।
यद्यपि, उक्त शोका तीनैजना निर्णायहरुले कुनै प्रश्न उठाएनन् । बेनिशा राईले उठेरै ताली बजाइन् भने दिलिप रायमाझी र गौरी मल्लले पनि वाहवाही नै गरे । दिलिप त अझ ‘म पनि गल्ति गर्छु’ भन्दै स्टेजमै पुगेर सोनिकासँग उसैगरी लहसिन खोजेका थिए ।
निश्चय पनि यो नृत्यका क्रममा सोनिा र दिलिपले केही शानदार स्टेपहरु देखाएका थिए । सोनिको शरीरको स्फुर्ति र लचकता प्रशंसालायक थियो । तर, संवेदनशील अंगहरुमा गरिएको स्पर्शले उनको नृत्य ओझेलमा पारिदियो ।
यो एपिसोड टप ८ को प्रतिस्पर्धा अन्तरगत गत २७ मेमा प्रशारण भएको थियो । डान्सिङ विथ स्टार्सको टप ७ मा सोनिकासहित धिरज राई, प्रिती आले, भगवति खड्का, अमर–अमृत दाहाल, छिरिङ शेर्पा र परमिता राणाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । डान्सिङ विथ स्टार्सको यो दोस्रो सिजन हो ।
नेपालगञ्जमा भर्खरै घट्याे यस्ताे दु:खद घटना, ९जना प्रहरी घाइते